कुन जडिबुटीले BPH लाई कम गर्न मद्दत गर्दछ?
समय: 2019-08-22 दृश्य:
धेरै जडीबुटी उपचारहरूमा एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी हुन सक्छ र बढ्ने सूजन. संक्रमण शरीरको पहिलो रक्षा संयन्त्र हो, घाउहरू, र हानि को अन्य प्रकारहरु. तथापि, जलन आफैमा पनि केही केसहरुमा हानिकारक हुन सक्छ. उदाहरणका लागि, धेरै अवस्थाहरूमा उत्तेजित हुन सक्छ ज्वलन्तलाई माथि रहन, ऊतक क्षतिको परिणामस्वरूप. जस्तै सौम्य प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया.
बीपीएच नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नका लागि एन्टिबायोटिक औषधिहरूको दायरा अवस्थित छ. तथापि, तिनीहरूसँग प्राय जसो साइड इफेक्टहरू हुन्छन् र सँधै प्रभावकारी हुँदैनन्। केही जडिबुटी उपचारहरूमा हुने प्राकृतिक मिश्रण. यो लेखले जडिबुटी उपचारहरू बीपीएच लाई कम गर्न मद्दत गर्दछ (सौम्य प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया).
सिट्रन विभिन्न पाक र औषधीय अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, भिटामिन सी को यसको उच्च स्तर को कारण र अन्य शक्तिशाली antioxidants. यो फल पनि उच्च आहार फाइबर प्रदान गर्दछ, क्यालसियम,फलाम, बीटा क्यारोटीन, नियासिन, म्यागनेस, जस्ता, सेलेनियम, भिटामिन बी, र पोटेशियम, केवल केहि नाम राख्न.
अध्ययनले देखाउँदछ कि प्रोस्टाटाइटिस र बीपीएच एक्लो एन्टिबायोटिक उपचार धेरै पुरुषहरूको लागि पर्याप्त छैन.
Citron ले तपाईंको पेटको माइक्रोफ्लोरामा स्वस्थ ब्याक्टेरियाको नोक्सानी पुनः स्थापित गर्न सक्छ एन्टिबायोटिक उपचारको कारण. यसले ब्याक्टेरियाको संक्रमण पुनरावृत्तिको जोखिम कम गर्दछ.
जीवाणु प्रोस्टाटाइटिस र बीपीएचको उपचारको लागि साइटरनका फाइदाहरू मानव क्लिनिकल अनुसन्धानमा प्रदर्शन गरिएको छ.
एक अध्ययन जीवाणु जीवाणुहरूको उपचारको लागि एन्टिबायोटिकको साथ सिट्रनको साथ पूरकको प्रभावहरू हेर्नुभयो प्रोस्टाटाइटिस.
सिट्रनले हानिकारक प्रकारको ब्याक्टेरियाबाट बचाउन सक्छ र एन्टिबायोटिक उपचारमा हराएको स्वस्थ-समर्थन ब्याक्टेरियाको घाटा पुनर्स्थापना गर्न सक्दछ. यसले प्रोबियोटिक्सलाई ब्याक्टेरिया प्रोस्टाटाइटिसको उत्तम उपचारहरू बनाउँदछ.
अदुवा ,वा Zingiber officinale, एक उष्णकटिबंधीय बोट हो जुन लामो परम्परागत औषधीहरूमा ठाउँ पाउँदछ.
अदुवामा एंटी-भड़काउने गुण हुन सक्छ. त्यहाँ छ अदुवाका धेरै घटकहरूले साइकोकिन्सको उत्पादन र साइक्लोक्सीजेनेस इन्जाइमहरूको गतिविधि सीमित गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणले देखाउँदछ।, जो सूजन लाई बढावा दिन्छ.
अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि अदुवाको एन्टी-भड़काउने गुणहरू धेरै सर्तहरूको उपचार गर्न उपयोगी हुन सक्छ, प्रोस्टाटाइटिस र बीपीएच सहित.
पर्स्लेनको औषधीय प्रयोग कम्तिमा पछाडि फर्किन्छ 2,000 वर्ष. Purslane स्नायु सम्बन्धी विकारहरुमा यसको औषधीय कार्यहरुको लागी अनुसन्धान गरिएको छ, मधुमेह, क्यान्सर, अल्सर, माइक्रोबियल संक्रमण, कलेजो रोग, र एक antioxidant र विरोधी भड़काउने रूपमा.
त्यहाँ दाबी समर्थन गर्न केहि प्रमाण छ कि संयोजन सिट्रन, dandelion, अदुवा, purslane, गार्डनिया र अन्य9परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा पीडा कम गर्न क्लिनिक रूपमा प्रभावकारी देखाइएको छ र बीपीएच पीडित पुरुषहरू द्वारा प्रयोग गर्नुपर्दछ.
अघिल्लोसाइटिका दर्दको लागि प्राकृतिक उपचार
अर्कोके पर्स्लेनले प्रोस्टाटाइटिसलाई मद्दत गर्दछ??